Mayelana NATHI - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
I-Dengfeng Ltd yinkampani yangasese eyakhiwe ngonyaka we-2009, egxile ekwakhiweni nasekukhiqizeni inqwaba yamakhithi okuguqula ukukhanyisa okuphuthumayo kufaka phakathi izinhlobo ezahlukene zamakhithi namadivayisi we-LED.
Inkampani igxila ekwenyusweni kwemikhiqizo yayo ngamakhasimende e-OEM futhi lapho kudingeka inikeze abasebenzi nezinto zokwenziwa ukwenza umsebenzi wokuguqula, ngaleyo ndlela iqinisekise ukuthi amakhithi okuguqula afakwa kahle ngokuya ngamazinga afanele aseYurophu, e-Australia, eMelika naseBrithani.
Sisebenzisa abasebenzi bendawo abangaphezu kwekhulu futhi siyaziqhenya ngezinga lethu elihle lokweneliseka kwezidingo. Iningi lemikhiqizo yethu lithunyelwa ngokulethwa kosuku olulandelayo, imvamisa noma yimuphi umyalo otholwe ngaphambi kwemini uzothunyelwa ukulethwa ngosuku olulandelayo, isikhathi esichazwe ngezindleko ezingeziwe.
Onjiniyela bensizakalo abanolwazi bakaDengfeng banikela ngensizakalo enekhono, yezobuchwepheshe 'esizeni'. Amamojula akhiqizwayo kanye / noma amaphakethe ebhethri ahlinzekiwe aqinisekiswe ngokuphelele.
Njengoba sesithuthele embonini yethu yesikwele semitha eyisikwele engama-3300 namuhla, amakhasimende ethu manje ayakwazi ukuzuza kumthamo owandisiwe nokusebenza kahle okwenziwe yilokhu kutshalwa kwezimali.